I-ShareX: Uhlelo Lokusebenza Oluvulekile lwe-Screenshot ku-Windows | Kusuka kuLinux
I-ShareX: Uhlelo Lokusebenza Oluvulekile lwe-Screenshot ku-Windows
Ukufaka kwe-Linux Post | | Aplicaciones, eziningana
Abelana isicelo sethu esilandelayo se- umthombo ovulekile ukuze Windows ukubuyekezwa. Abelana isicelo esincane kepha esinamandla sokuphatha Izithombe-skrini (Izithombe-skrini / Izithombe-skrini) mayelana ne- Isistimu yokusebenza de Microsoft.
Phambilini bekuyisicelo Sandboxie, Umsebenzi wawo noma okusetshenziswayo ukusebenzisa noma yiluphi uhlelo lokusebenza ngaphakathi kwendawo ephephile neyodwa.
Abelana ngaphandle kokuba isicelo mahhala futhi evulekileIyakwazi ukuthatha noma ukurekhoda noma iyiphi indawo yesikrini sekhompyutha, ungabelana ngokuthwebula kwakho, ulayishe izithombe, umbhalo noma ezinye izinhlobo zamafayela ezindaweni eziningi ezihambisanayo nezifanelekayo. Izizathu ezenza kube kuhle kakhulu Ukubanjwa kwesikrini, indlela lokwabelana ngefayela futhi ilusizo ithuluzi lokukhiqiza.
Okwamanje, akuyona ipulatifomu yokuwela, ngakho-ke inokuphunyelelwayo kwe- IWindows (.exe) kanye nalo ikhodi yomthombo (.zip / .tar.gz), Njengoba kungabonakala kusayithi labo GitHub bese ulanda kufayela lakho le- inguqulo yakamuva ikhishwe. Futhi, kuza nefayela le- ukusekelwa okuhle kwezilimi eziningi, ehlanganisa izilimi ISipanishi, isiNgisi, isiJalimane, isiFulentshi, isiPutukezi nesiNtaliyane, phakathi kokunye okuningi.
1 I-ShareX: Ukubanjwa kwesikrini
1.1 Izici ezijwayelekile
1.2 Yini okusha kunguqulo 13.1.0
I-ShareX: Ukubanjwa kwesikrini
Okwamanje, Abelana uya ku- inguqulo ezinzile 13.1.0, nosuku lokukhishwa kwe- I-01 March ka-2020. Futhi phakathi kwezimpawu zayo ezivelele, kuchazwe okulandelayo:
Isicelo samahhala futhi esivulekile.
Iminyaka engaphezu kwengu-12 yentuthuko nesipiliyoni esinqwabelene.
Ilula futhi ayiqukethe nhlobo izikhangiso.
Ukusetshenziswa okulula nokusheshayo kwanoma yiluphi uhlobo lomsebenzisi nakunoma iyiphi inguqulo yeWindows.
Ukusebenza kwayo (ukuhamba komsebenzi) kwenziwa ngezifiso (kuyalungiswa).
Ikuvumela ukuthi uthwebule noma urekhode isikrini esigcwele, isifunda noma iwindi kuDeskithophu.
Faka futhi / noma uthumele izithombe, namafomethi wokuqukethwe ahlukahlukene, kumasayithi ahlukahlukene akwi-Intanethi.
Futhi ifake amathuluzi wokukhiqiza ahlukahlukene, njenge:
Umphathi wekhodi ye-QR
Isithonjana Semenenja Yesithombe
Isiphathi sevidiyo seThumbnailer
Yini okusha kunguqulo 13.1.0
Ngokusho kwe- Changelog yale nguqulo, inezinguquko ezilandelayo:
Ithebhu entsha ebizwa nge- "Theme" ingeziwe ewindini lezilungiselelo zohlelo lokusebenza. Ukwenza ngcono ukuphathwa kwezihloko "Sula" futhi "Ezimnyama" ezingeni elijwayelekile.
Manje ukubuka kwezithonjana ewindini elikhulu kusekela ukukhetha okuningi ngokubamba phansi ukhiye we-Ctrl / Shift bese ukhetha izithonjana. Ngokwengeziwe, ukubuka isithonjana manje kusekela izinqamuleli zekhibhodi, phambilini ezazitholakala kuphela ekubukweni kohlu.
Inketho yokuthola isithonjana sesihloko ingezwe kwimenyu yokuchofoza kwesokudla kwewindi elikhulu futhi imenyu engaphansi ethi "Yenza isenzo" yengezwe emsebenzini wewindi elikhulu, kusetshenziswa imenyu yokuchofoza kwesokudla.
Umphumela wesithombe se- "Particles" ungeziwe. Isibonelo, ingasetshenziselwa ukwengeza amakhekheba eqhwa kuma-skrini, futhi inketho yokuma okungahleliwe ye-watermark yesithombe isusiwe ngoba umphumela wesithombe se- "Particles" ungasetshenziselwa inhloso efanayo.
Izinkinobho zokuxhumana zenhlalo zengezwe ngezansi kwesobunxele kwewindi eliyinhloko, njenge-Twitter ne-Discord.
Ithuluzi elibizwa nge- «Video Converter» lingeziwe, elivumela ukufaka ikhodi kusetshenziswa la makhodi wokufaka: H.264 / x264, H.265 / x265, VP8 (WebM), VP9 (WebM), MPEG-4 / Xvid, GIF, WebP kanye ne-APNG. Ngaphezu kwethuluzi elibizwa nge- "Image Splitter", elingasetshenziswa, ngokwesibonelo, ukwenza ama-emoji amakhulu wenethiwekhi ye-Discord.
Mina uqobo, izikhathi ezimbalwa engizisebenzisayo Windows, Abelana eyami ithuluzi eliyintandokazi de umthombo ovulekile ukuphathwa kwe izithombe-skrini.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «ShareX», uhlelo lokusebenza oluncane kodwa olunamandla lwe «Código Abierto» yokuphathwa kwe Izithombe-skrini (Izithombe-skrini / Izithombe-skrini) mayelana Uhlelo Lokusebenza lweWindows; ube kakhulu inzalo nokusetshenziswa, Kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Futhi ukuthola eminye imininingwane, unganqikazi njalo ukuvakashela noma yikuphi Umtapo wolwazi oku-inthanethi njengoba I-OpenLibra y JedIT ukufunda izincwadi (ama-PDF) ngalesi sihloko noma ezinye izindawo zolwazi. Okwamanje, uma ukuthandile lokhu «publicación», ungayeki ukuyaba nabanye, ku- Amawebhusayithi ayizintandokazi, iziteshi, amaqembu, noma imiphakathi zokuxhumana nabantu, okungcono mahhala futhi evulekile njenge I-mastodon, noma ukuphepha nokuyimfihlo kwangasese yocingo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-ShareX: Uhlelo Lokusebenza Oluvulekile lwe-Screenshot ku-Windows
Uhlobo olusha lohlelo lwemiyalezo iMattermost 5.22 seluvele lukhishiwe
Abathuthukisi be-ZFS Linux bangeze ukusekelwa kwe-FreeBSD